Fikarakarana ny fanolanana zaza: Orinasa fizahantany ahazoam-bola be ho an'ny miaramila israeliana teo aloha
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Fikarakarana ny fanolanana zaza: Orinasa fizahantany ahazoam-bola be ho an'ny miaramila israeliana teo aloha
Enga anie 26, 2019
Mandehandeha any Colombia matetika ireo mpizahatany mitady zava-mahadomelina sy manolana ankizy. Ity dia lafiny maizin'ny fizahan-tany.
Ny fitrandrahana ara-nofo sy fanondranana olona an-tsokosoko dia miely amin'ny faritra maro eto amin'izao tontolo izao, anisan'izany i Kolombia.
Miaramila israeliana teo aloha notadiavin'i Kolombia noho ny fanondranana olona an-tsokosoko, anisan'izany ireo tsy ampy taona, dia voasambotra tany Portugal araka ny filazan'ny polisy espaniola izay nandray anjara tamin'io asa io.
Taorian'ny fanarahana azy tany Ibiza sy i Barcelone dia nosamborin'ny polisy i Assi Moosh, 45 taona, tany akaikin'i Lisbonne, ny alarobia teo am-pitanana ny antontan-taratasy momba ny israeliana sandoka, hoy ny hery polisy Guardia sivily ao amin'ny fanambarana iray.
Ampangaina ho niasa hotely “tahaka ny bunker” any Taganga izy, tanàna fanjonoana Kolombiana izay nanjary ankafizin'ny mpanao kitapom-batsy sy mpizahatany. Tao amin'ny hotely nohararaotina vehivavy tanora sy zazavavy tsy ampy taona.
Noroahin'ireo manampahefana Kolombiana i Moosh - nantsoin'ny haino aman-jery an-toerana hoe "the Devil of Taganga" - tamin'ny 2017 satria noheverina ho nandrahona ny filaminam-bahoaka izy.
Taorian'ny sesitany azy dia namoaka didy fampisamborana iraisam-pirenena ho an'i Moosh amin'ny alàlan'ny Interpol i Colombia noho ny fanondranana olona an-tsokosoko zava-mahadomelina, fanodikodinam-bola ary fanondranana olona ho fanararaotana ara-nofo.
Tamin'ny volana desambra dia nanambara ny polisy kolombiana fa misy hetsika fanoherana ny peratra fanararaotana ara-nofo i Moosh izay ahiahiana ho tafapetraka. Isiraeliana telo sy kolombiana roa no voatazona tao amin'ny tsindry hazo lena.
Eo amin'ny lalan'ny famonoan-tena ve i Sri Lanka?
Hafatra filoham-pirenena momba ny fizahantany afrikanina ho an'ny Andron'i Afrika